Afaka Naneho Hevitra Antserasera Ireo Vahiny Mpiasa An-trano ao Singapaoro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Septambra 2016 11:19 GMT
Ny Fikambanana Maha-olona ho an'ny Toekaren'ny Mpifindra Monina, na “HOME,” mikendry “hanome feo ho an'ny tsy afaka miloa-bava” ao Singapaoro amin'ny alalan'ny fanomezana sehatra (tranonkala iray antsoina hoe “NyFeoko”) ho an'ireo mpiasa mpifindra monina mba hanoratana sy hamoahana ny tantara, lahatsoratra, sary, sy tononkalon'izy ireo. Ny vondrona fisoloana vava dia manolotra fanampiana ho an'ireo mpiasa niharan'ny fanararaotana ihany koa.
Araka ny hita amin'ny lahatahirin'ny fanjakana, ahitana vahiny mpiasa 1,3 tapitrisa voasoratra anarana ao Singapaoro. Mihoatra ny 200.000 amin'ireo olona ireo no mpiasa an-trano, avy amin'ny firenena manodidina tahaka an'i Filipina, Indonezia, Myanmar, ary India ny ankamaroan'izy ireo.
Tato anatin'ny taona vitsivitsy, nivoaka ny tatitra momba ireo mpiasa an-trano iharan'ny fikarakarana ratsy ataon'ny mpampiasa azy ireo. Mitombo ny tranga fanararaotana, na dia eo aza ny lalàna vaovao natao hiarovana ny zon'ny mpiasa an-trano. Tamin'ny volana lasa, nitatitra tantara miendrika fanandevozana mihatra amin'ireo mpiasa vahiny maherin'ny 9.000 ny tranonkalam-baovao Singapaoreana.
Myrna Javier, ohatra, nanoratra tononkalo momba ny ankizy iray izay miasa any amin'ny firenen-kafa ny reniny. Ity ny ampahany amin'ny tononkalo
Mampiseho ny zava-iainan'ireo mpiasa an-trano marobe niharan'ny fanararaotana ary nitady fanampiana tany amin'ireo vondrona tahaka ny HOME ny tononkalon'i Bhing Navato:
Nahita aingam-panahy hanampiana ny hafa i Desi, mpiasa an-trano Indoneziana niharan'ny fanararaotana:
Ity tononkalo avy amin'i Rosita Madrid Sanchez ity dia maneho taratra ny tantaran'ireo mpiasa izay nianatra hampihatra ny zon'izy ireo:
Maria Allen Cellan nandrisika ireo mpiasa mpifindra monina namana mba hanohy hatrany ny nofin'izy ireo: